Goolhaye David de Gea oo iska diidaya heshiis kordhinta kooxda Manchester United… (Muxuu qorsheynayaa?) – Gool FM
Goolhaye David de Gea oo iska diidaya heshiis kordhinta kooxda Manchester United… (Muxuu qorsheynayaa?)
Haaruun September 9, 2019
(Manchester) 09 Sebt 2019. Goolhaye David de Gea ayaa lagu soo waramayaa inuu u sheegay saaxiibadiisa inuu qorsheynayo inuu iska diido heshiis kordhinta cusub oo ay u soo bandhigtay Manchester United iyadoo miiska u saartay mushahar dhan 350,000 oo gini isbuucii, isagoo raba inuu kooxda beeca xorta ah uga tago sanadka soo socda.
Xiddigan reer Spain kaasoo u soo dhaqaaqay garoonka Old Trafford sanadkii 2011-kii ayaa naftiisa ka dhigay mid ka mid ah hantida ugu qaalisan kooxda tan iyo markii uu shaqada ka tagay tababare Sir Alex Ferguson sanadkii 2013-kii.
De Gea ayaa wadahadallo kula jiray Man United heshiis ka badan hal sano, waxaana uu si xor ah u noqon doonaa xagaaga soo socda, haddii ay ku guuldarreysato inay heshiis cusub la gaarto.
Sida uu warinayo Wargeyska The Sun, Goolhayahan ayaa qorsheynaya inuu qandaraaskiisa hoos u dhigo oo uu wadahadallo la bilaabo kooxo kale bisha Janaayo.
Soo bandhigista mushaarka haatan ee ah 350,000 oo gini isbuucii ayaa De Gea ka dhigaya goolhayaha ugu mushaharka badan Adduunka, laakiin tani kuma filnaan karto isaga.
28-sano jirkaan ayaa la sheegayaa inuu shaki gelinayo ku guuleysiga koobabka waa weyn ee kooxda Manchester United sanadaha yar ee soo socda.
Yuu la saftay halyeeygii hore kooxda Liverpool ee Robbie Fowler, xiddigaha isku dhacsan ee Saalax iyo Mané?